Manala ny kibo sy ny roroa
Satria sarotra ny manala ny kibo dia tokony hiovaova ny fampihetseham-batana hanalana azy, amin'izay mandaitra foana izany. Ireto misy fanampiny azonao atao mifandimby amin'ireo efa natolotra anao tany aloha :
Manintsana kibo ao an-trano
Hanampy anao hanala ny tavy miandrona ao amin’ny roroa ireto fampihetseham-batana manaraka ireto :
Manamafy ny hozatry ny fitombenana sy ny fe
Faritra tsara hamafisina matetika ny fitombenana sy ny fe satria manatsara ny bikan’ny vehivavy. Hanampy anao amin’izany ireto :
Tsy misy fotoana hanaovana spaoro, ireto atao
Sakana tsy hahafahan’ny vehivavy maro manao fanatanjahantena ny tsy fananana fotoana atokana ho amin’izany. Ireto misy vahaolana azo atao amin’izany :
Mandrafitra ny fitombenana sady manamafy ny fe
Mba handaitra sy hisy vokany ny fampihetseham-batana hatao dia tsara ovaovaina foana ny karazany.
Efa hiaraha-mahalala fa mialohan’ ny hanaovana spaoro na inona na inona izany dia tsy maintsy manafana tena aloha. Tsy tokony hatao ambanin-javatra mihitsy izy io satria mety mitarika voka-dratsiny raha tsy hatao. Araho anie :
Maro karazany ny ratra mety hitranga raha toa ka tsy mafana tsara ny vatana sy ny hozatra kanefa mampihetsi-batana.
Mahavoan’ny « Crampe” : fikainkonan’ny hozatra izay manaintaina be ny « crampes ». Heverina fa vokatry ny tsy fahampiana rà na « oxygène » izy io kanefa mety mahatonga azy koa ny tsy fahampian’ny fanafanana tena.
Mahavoan’ny « élongation » : Mihitatra mihoatra ny tokony ho izy ny hozatra ary tena manaintaina ny faritra voan’izany. Mety hitarika ratra ao anatin’ny hozatra mihitsy izy io. Misy mangana matetika eo amin’ny faritra voany raha eo ambanin’ny hoditra no misy azy. Raha any anaty kosa ny ratra dia toy ny tsatok’antsy ny fanaintainana tsara.
Manana anjara toerana lehibe amin’ny famerenana ny vatana amin’ny laoniny aorian’ny ezaka natao ny fanafanana tena. Misy karazany roa moa ny fomba famerenana ny vatana amin’ny laoniny
Ny voalohany dia ny fanaovana fampihetseham-batana malefaka aorian’ny spaoro hatao. “Etirement” matetika no atao eo.
Ny faharoa kosa dia tena mifanohitra tanteraka amin’io dia ny fakàna aina tanteraka. Matory na maka aina fotsiny izany.
Tena hihisatra, izany hoe : elaela kokoa sady hananosarotra kokoa ny famerenana ny vatana amin’ny laoniny raha vao tsy nafana tsara nialoha ny nanaovana spaoro. Fantaro anefa fa hahafahan’ny vatana manintsana ny loto toy ny « acides lactiques » haingana kokoa ny famerenana aina haingana. Ity asidra ity mantsy no mahatonga fanaintainana any anaty hozatra. Noho izany raha tsy te-ho voan’ny “courbatures” dia tokony hanafana tena tsara mihitsy mialohan’ ny hanaovana fampihetseham-batana.
Iray andro aorian’ny ezaka natao vao mipoitra ny fambara rehetra rehefa tsy ampy tsara ny fanafanana tena.
Tokony hisotro rano tsara aorian’ny ezaka natao.